Say ‘I Love You’ ( 2014 ) - Myanmar Asian TV
Say “ I Love You “ ( 2014 ) – မြန်မာစာတန်းထိုး
2014 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ 2012 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Anime လေးကို Live Action အဖြစ် ပြန်လက်အသက်သွင်းထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် မင်းသား Sota Fukushi နှင့် မင်းသမီး Haruna Kawaguchi တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းလေးကတော လူငယ်တွေအကြိုက်ဖြစ်စေမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါပဲ …
ယမတို ( Sota Fukushi ) ကတော့ အထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရဲ့ Popular အဖြစ်ဆုံး ကျောင်းသား တစ်ယောက်ပေါ့ … ကျောင်းသူတိုင်းလိုလိုကလဲ သူနဲ့ Date လုပ်ချင်ကြတဲ့ SKB ကြီးပေါ့ … လူတိုင်းအပေါ် ဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့ ဆက်ဆံတယ် … ကူညီတယ် … မာန မထားဘူး … သူငယ်ချင်း ပေါတယ် … ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကျောင်းသားလေးတစ်ဦးပေါ့ …
တချဘန မဲအိ ( Haruna Kawaguchi ) ကလဲ အဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာပဲ တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးပေါ့ … ဒါပေမဲ့ အတိတ်ရဲ့ ထိုးနှက်မှု ဒဏ်ရာတစ်ချို့ကြောင့် ဘယ်သူနှင့်မှ စကားမပြော … သူငယ်ချင်းမရှိ ပဲ သူ့အသံတောင် မကြားဖူးဘူးလို့ ပြောရလောက်ထိ ငြိမ်သက်ပြီး နေတတ်တဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးပေါ့ …
အဲ့လိုနဲ့ ကျောင်းရဲ့ Popular အဖြစ်ဆုံး ကျောင်းသား ” ယမတို ” နဲ့ အမြဲလို ခပ်အေးအေးနေတတ်တဲ့ ” မဲအိ ” တို့ တွေ့ကြတယ့်အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ?
ယမတို ကရော မဲအိ ထံ ဘယ်လို ချဉ်းကပ်မလဲ ?
ဆိုတာကိုတော့ ” Say I Love You ” ဆိုတဲ့ J-Movie လေးမှာ ဆက်လက်ခံစားလိုက်ကြရအောင်နော် …
Drama , Romance & School ကားလေးဖြစ်ပြီး Rating အရ IMDb မှာ 6.7/10 မှာ ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက်မလွှတ်ပဲ ကြည့်ရှုဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေဗျာ …
Translator : Ziven & Noe
Actors: Haruna Kawaguchi, Rika Adachi, Rima Nishizaki, Ryosuke Yamamoto, Sota Fukushi, Tasuku Nagase, Tomohiro Ichikawa
Soliddrive.co Myanmar600 MB Download Openload.co Myanmar600 MB Download
Tokyo Ghoul ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ … Anime မှာလည်း နာမည်ကြီးပြီးသား ဇာတ်ကားတစ်ခုပါ … အခုချိန်မှာတော့ Live Action ဖြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားထွက်ရှိလို့လာပါပြီ … လုံးဝမကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် ဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးကို ပြောရမယ်ဆိုရင် – ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှာ ဂူးလ်ဆိုတဲ့အကောင်တွေ ရှိနေတာမို့လို့ အစိုးရဘက်က လိုက်ဖမ်းနေတဲ့အချိန် … စာအရမ်းဖတ်တဲ့…
2006မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Song to the sun ဆိုတဲ့ JapanMovieလေးကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ movieလေးပါ … Review ကေတီပရိုက်စ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက လူတစ်သန်းမှာတစ်ယောက်လောက်ပဲဖြစ်တတ်တဲ့ XerodermaPigmentosum(XP)ဆိုတဲ့ ရှားပါးမျိုးဗီဇရောဂါတစ်ခုကိုခံစားနေရတဲ့သူ အဲ့ရောဂါက နေရောင်နဲ့လုံးဝထိတွေ့လို့မရဘဲ ထိမိရင်အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တာတွေချို့ယွင်းပြီး သေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ် သူ့ဘဝမှာ အရင်းနှီးဆုံးသူဆိုလို့ သူ့အဖေနဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းမော်ဂန်ပဲရှိတယ် အမြဲအိမ်ထဲမှာပဲနေနေရပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေပဲကြည့်နေရတယ် တစ်ရက်မှာတော့သူ့အိမ်ရှေ့ကဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့ချာလီဆိုတဲ့ကာင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီး အမြဲစောင့်ကြည့်ပြီးတိတ်တခိုးချစ်နေမိတယ် ကောင်လေးကတော့ သူရှိနေမှန်းတောင်မသိပါဘူး 😢😢 ဒီလိုနဲ့တစ်ညမှာတော့အဲ့ကောင်လေးနဲ့မမျှော်လင့်ဘဲတွေ့မိပြီး…
Trailer: Say ‘I Love You’ ( 2014 )